Hevero izay hiafaranao! – FJKM Ambavahadimitafo Hevero izay hiafaranao! |
Hevero izay hiafaranao!
Publié le 22 février 2021 à 04:02
Alahady 21 febroary 2021, alahadin’ny arsiva sy tranom-bakoka FJKM, alahady voalohany amin’ny Karemy.
Ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain no nitondra ny tenin’Andriamanitra avy ao amin’ny Matio 13;47-52 : » 47Ary koa, ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny harato-tarihina, izay nalatsaka tao amin’ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra; 48ary rehefa feno izany, dia notarihiny ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara hataony ao an-karona, fa ny ratsy nariany. 49Dia tahaka izany no hatao amin’ny fahataperan’izao tontolo izao; hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin’ny marina, 50dia hatsipiny any amin’ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.51Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy: Eny.52Dia hoy Izy taminy: Koa amin’izany ary ny mpanora-dalàna rehetra izay nampianarina ho amin’ ny fanjakan’ny lanitra dia samy tahaka ny tompon-trano, izay mamoaka avy amin’ny firaketany zava-baovao sy ela. »